Obí nke Bardo - ysmụ nwoke --hụnanya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Obí nke Bardo nkezi 4.2 / 5 si 10
NA / A, o nwere ihe nlere 48.1K
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị nwụọ, ọbụlagodi na ịlọ ụwa… will gaghị enwe ike ịhapụ m. Enweghi m ike ịnabata eze ukwu ahụ, bụ onye ara na njiri mara ya, egburu m onwe m. Ma otu narị afọ gafere… na a mụrụ m ọzọ, dị ka a ga - asị na ọ bụ akara aka, dị ka a ga - asị na akara aka megharịrị m anya. Na ncheta m gara aga na-agbanwe agbanwe na nke ahụ !! Ekweere m nkwa na m gaghị ahụ ya ọzọ, mana enwere m olile anya na ọ ga-echefuola ihe ncheta ya niile.
Nwere ike ịchọpụta ọtụtụ yaoi hentai